HP G62 LAPTỌỌPỤ DISASSEMBLY - WINDOWS - 2019
HP G62 Laptọọpụ Disassembly
Na Windows 10, a ka nwere ntụpọ na mmejọ. Ya mere, onye ọ bụla nke os os nwere ike ịnata eziokwu na mmelite achọghị ka ebudata ma ọ bụ arụnyere. Microsoft nyere ohere iji dozie nsogbu ndị a. Ọzọ anyi lere usoro a anya karia.
Troubleshoot Windows 7 melite nrụpụta nsogbu
Imeri nsogbu ahụ site n'ịwụnye mmelite na Windows 10
Microsoft na-atụ aro ịmepụta nrụnye akpaka nke mmelite iji zere nsogbu ọ bụla na njirimara a.
Jide obere ụzọ keyboard Na-emeri + m ma gaa "Imelite na Nche".
Ugbu a gawa "Nhọrọ Di elu".
Họrọ ụdị nwụnye ikuku.
Ọzọkwa, Microsoft na-adụ ọdụ ka imechi nsogbu na mmelite. "Mmelite Windows" ihe dị ka nkeji 15, wee laghachi ma lelee mmelite.
Usoro 1: Malite ọrụ melite
Ọ na - eme na ọrụ achọrọ achọtara nkwarụ na nke a bụ ihe kpatara nsogbu na nbudata nwelite.
Pinch Nweta + R ma tinye iwu ahụ
wee pịa "OK" ma ọ bụ igodo "Tinye".
Pịa bọtịnụ òké aka ekpe ugboro abụọ. "Mmelite Windows".
Malite ọrụ site na ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị.
Usoro 2: Jiri Computer Troubleshooter
Windows 10 nwere ọrụ pụrụ iche nke nwere ike ịchọta ma dozie nsogbu na usoro.
Pịa aka nri na akara ngosi ahụ. "Malite" na n'ime ihe ndị ọzọ na-aga "Ogwe njikwa".
Na ngalaba "System na Nchebe" chọta "Chọta ma dozie nsogbu".
Na ngalaba "System na Nchebe" họrọ "Nchọpụta nsogbu ...".
Ugbu a pịa "Di elu".
Họrọ "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta".
Nọgide na ịpị bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Usoro nke ịchọta nsogbu ga-amalite.
N'ihi ya, a ga-enye gị akụkọ. I nwekwara ike Lelee ozi ndi ozo. Ọ bụrụ na ọrụ ahụ achọta ihe, a ga-akpali gị idozi ya.
Nzọụkwụ 3: Jiri "Nchọpụta Mgbasaozi Windows"
Ọ bụrụ na ị nwere ike iji usoro ndị gara aga ma ọ bụ ha enyereghị aka, ị nwere ike ibudata ọrụ ahụ na Microsoft maka nchọpụta nsogbu.
Gbaa ọsọ "Nchọpụta Mgbasaozi Windows" ma nọgide.
Mgbe ịchọtara nsogbu, a ga-enye gị akụkọ gbasara nsogbu na ndozi ha.
Usoro 4: Nwelite mmelite na nke gị
Microsoft nwere ndekọ nke mmelite Windows site na ebe onye ọ bụla nwere ike ibudata ha n'onwe ha. Ihe ngwọta a nwekwara ike ịba uru maka mmelite ahụ 1607.
Gaa na ndekọ ahụ. N'ime igbe ọchụchọ, dee ụdị nke nkesa nkesa ma ọ bụ aha ya wee pịa "Chọọ".
Chọta faịlụ achọrọ (detuo ikike nke usoro - ọ ga-adaba na nke gị) ma jiri bọtịnụ ahụ kwụnye ya "Download".
Na windo ọhụrụ, pịa njikọ njikọ.
Chere ruo mgbe ibudata zuru ezu ma wụnye mmelite aka.
Nzọụkwụ 5: Kọwaa nchekwa melite
Meghee "Ọrụ" (esi eme nke a na ụzọ mbụ).
Chọta na ndepụta "Mmelite Windows".
Kpọọ menu ma họrọ "Kwụsị".
Ugbu a gaa n'okporo ụzọ
Họta faịlụ niile n'ime folda ma họrọ na menu ndokwa "Hichapụ".
Mgbe ahụ laghachi azụ "Ọrụ" na-agba ọsọ "Mmelite Windows"site na ịhọrọ ihe kwesiri ekwesiri na menu ndi ozo.
Kọmputa gị nwere ike ibute nje, nke bụ ihe kpatara nsogbu na mmelite. Lelee usoro na scanners mkpanaka.
Gụkwuo: Ịlele kọmputa gị maka nje ndị na-enweghị antivirus
Lelee ohere ịnweta ohere na usoro diski iji wụnye nkesa.
Ikekwe firewall ma ọ bụ antivirus na-egbochi isi iyi nbudata. Gbanyụọ ha n'oge nbudata na nwụnye.
Hụkwa: Gbanyụọ antivirus
Isiokwu a enyewo nhọrọ kachasị dị irè iji wepụ ihe nbudata na nbudata ma wụnye mmelite Windows 10.